Uyicima njani iMac yakho ngokukhawuleza ngokudibanisa isitshixo | Ndisuka mac
Uyicima njani iMac yakho ngokukhawuleza ngokudibanisa okungundoqo
Ukuba yonke imini sihlala singena kwi-Mac ngokuphindaphindiweyo kodwa ngokukhawuleza, kunokwenzeka ukuba ukhethe ukuphuma ngokukhawuleza ngaphambi kokuba uhambe ukuze xa ufuna kwakhona, zonke izicelo ozivulekileyo zivulekile kwaye akudingeki yiya nganye nganye uwavule kwakhona. Kodwa ukuba ungomnye wabo basebenzisi abangafuniyo ukushiya ikhompyutha bayokuphumla kwaye bakhetha ukuyicima ngalo lonke ixesha kufuneka siphume, ukonga umbane, mhlawumbi ungaphezu kokudinwa kukuya imenyu ephezulu ukufikelela kukhetho lokuvala. Ngethamsanqa enkosi kwiindlela ezimfutshane, singayenza le nkqubo ngokukhawuleza kwaye ngokulula.
Ukucima iMac ngokukhawuleza ngaphandle kokuya kwiimenyu zeMac, kufuneka nje sicinezele kunye ukwazisa amaqhosha Lawula + Ukukhutshwa kweMedia. Ngokukhawuleza ukuba ucinezela ezi zinto zidibeneyo kwiscreen, kuya kuvela imenyu esinokuyicima ngayo iMac, siyilale, uyiqale kwakhona okanye ucime. Ngokucacileyo, eli qhinga lisebenza kuphela kwiimodeli zeMac ezisebenzisa ikhibhodi yangaphandle, njengeMac Mini kunye neMac.
Ukuba iMac yakho ilaptop, indibaniselwano ephambili yile Lawula + ukucofa iqhosha. Ezi zikhetho zilandelayo ziya kuthi ziboniswe: ukuqala kwakhona, ukulala, ukucima kunye nokucima. Enye indlela yokuyicima iMac yethu kodwa ngaphandle kokusebenzisa iindlela ezimfutshane kukucofa iqhosha lokucima umzuzwana nesiqingatha. Emva kweli xesha, imenyu yokuvala iya kuvela kwiscreen esivumela ukuba siyiqale kwakhona, siyilale, siyicime okanye siyicime.
Andikaze ndikhuthaze iindlela ezimfutshane ezinqamlezileyo ndide ndizame kwaye ndikuqhele ukuzisebenzisa. Kuba uyalithanda ixesha endilichitha ndisebenzisa imouse incitshisiwe kakhulu. Ukuba uchitha iiyure ezininzi phambi kwekhompyuter, kunokuba ngumbono olungileyo ukuqala ukusebenzisa iindlela ezimfutshane zekhibhodi. Uya kuyivuyela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyicima njani iMac yakho ngokukhawuleza ngokudibanisa okungundoqo
I-Fire TV Stick iya kuvumela iAmazon ukuba ikhuphisane neApple TV kaApple
Oku kunokuba likamva lommandla we-macOS